Nolavin’ny mpanara-maso ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety toy ny ‘setroka’ ny ’70 Taonan’ny Fivoaran’ny Zon’olombelona ‘ tany Shina · Global Voices teny Malagasy
Lazain'ny mpitsikera ho "manafangaro ny fandrosoana amin'ny zon'olombelona" ilay lahatsoratra.
Voadika ny 12 Oktobra 2019 8:01 GMT
Namoaka taratasy ofisialy momba ny fepetran'ny zon'olombelona any Shina ny Biraon'ny Filakevi-panjakana Shinoa tamin'ny 22 Septambra 2019 mialoha ny faha-70 taonan'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina. Mitondra ny lohateny hoe “Mikatsaka ny fahasambarana ho an'ny Vahoaka: 70 Taona Nivoaran'ny Zon'olombelona teto Shina” , mamaritra ny zon'olombelona ho toy ny zon'ny vahoaka amin'ny fahasambarana sy ny fampandrosoana ity taratasy ofisialy ity.
Raha nanambara i Shina fa lasa mpandala ny demokrasia marina izy sady tompondakan'ny zon'olombelona dia nitsipaka ilay tatitra ho toy ny “setroka” natao hanafenana ny “fandraketana mahatsiravina” avy amin'i Shina rehefa miresaka momba ny zon'olombelona sy ny fahalalahan'ny asa fanoratan-gazety ny mpanara-maso ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety iraisam-pirenena Reporters Sans Frontières.
Indro ny lahatsoratra feno tamin'ny taratasy ofisialy: Mikatsaka ny Fahasambarana ho an'ny Vahoaka: 70 Taona Nivoaran'ny Zon'olombelona teto Shina https://t.co/WYEB7hyAlG pic.twitter.com/1zBH30w2D9
Nanambara ny taratasy fa voaaro tsara ny zon'ny foko vitsy an'isa ary niampy ny fitanisana ny fitomboan'ny harin-karena faobe tany amin'ny faritra mizaka-tena miisa dimy any Mongolia, Guangxi, Tibet, Ningxia ary Xinjiang ihany koa izany na dia teo aza ny fanakianana mavesatra iraisam-pirenena momba ny fepetran'ny zon'olombelona ao Tibet sy Xinjiang.
Nandrisika ny vondrom-piarahamonina iraisampirenena i Cédric Alviani, lehiben'ny biraon'ny Reporters Sans Frontières any Azia Atsinanana mba tsy ho adalain'ny “lahatsoratra izay mikasa hampifangaro ny fandrosoana amin'ny zon'olombelona araka ny nofaritan'ny Fanambarana Iraisampirenena Momba ny Zon'olombelona, ​​izay anisan'ny nosoniavin'i Shina saingy nohitsakitsahiny isan ‘andro “.